Matambo matsvuku emitambo yeApple yako Watch | Ndinobva mac
Uye isu tinopedzisa zuva nechimwe chishongedzo, ino nguva yeApple yako Watch uye inowirirana nenhumbi dzandakuratidzira mune yapfuura chinyorwa. Kana ndisati ndatsvaga zvishongedzo zvakatsvuka uye zvine dhizaini yakanaka kwazvo kune yako AirPods, ikozvino yave nguva yeiyo Apple Watch Uye kana iwe ukaisa zvakanaka uye kugadzirisa zvese, unogona kutora mimhanzi yako newe neApple Watch yako ndokurova mumigwagwa kuti umhanye uye unakirwe nemasikirwo pasina chero mimwe michina pauri.
Zvakafanana zvinoitika kana iwe ukaenda kunzvimbo yekurovedza muviri uye ukabuda ziya. Iwe unogona kutora yako Apple Watch uye yako AirPods uye uve godo remukamuri.
Iye zvino unogona kuve nemidziyo iyi uye usazvipfeke muchitaera;). Pasina kupokana, kuve nemidziyo ine inoenderana accessories kunopa kuenderera kune dhizaini inoita kuti vanhu vatendeuke kuti vaone zvawakapfeka. Zvekare zvakare, ini ndinorangarira izvo nekuda kwekuravira, mavara uye izvo mune ino blog vazhinji vashandisi vano tinoita senge idzi mhando dzesarudzo dzemidziyo yedu.
Ngatiendei kune zvatichaita uye zvandiri kuda kukuratidza mune ino chinyorwa hachisi chinhu chitsva chausina kukwanisa kuona pane mamwe mawebhusaiti kana zvinyorwa, asi ini ndakazviona zvichinakidza kukupa zvinongedzo uye zvakananga mapikicha chinyorwa chakapfuura kuitira kuti iwe uwane zvese zviripo uye iwe unogona kuve mune matatu mbeva kudzvanya kana chigunwe kudzvanya matatu akatengwa.
Tambo dzandinokuratidza dziri muchimiro cheApple Watch Nike + asi inogadzirwa nevechitatu mapato uye mutengo wayo unotaura zvese. Sarudzo mbiri dzandinokuratidza iri bhendi ine zvigadzirwa zveNike + tambo asi mune maviri akasiyana mavhezheni kusvika kune mavara ane chekuita.
Yekutanga yakatsvuka kunze neiyo yemukati yakasviba uye yechipiri igirazi, ndiko kuti, nhema kunze nekunze mukati mutsvuku. Iwe une zvese zvingasarudzwa zviripo pane zvinotevera zvinongedzo:
Tsvuku neyemukati nhema: 13,99 euros
Nhema ine tsvuku yemukati: 13,99 euros
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matambo matsvuku emitambo kune yako Apple Watch